Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo maanta la wareegay tuulooyin ka tirsan Sh/hoose | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo maanta la wareegay tuulooyin ka tirsan Sh/hoose
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo maanta la wareegay tuulooyin ka tirsan Sh/hoose
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa maanta la wareegay tuulooyin ka tirsan degmada Awdheegle ee Gobolka Shabellaha Hoose, kadib markii maalmihii u dambeeyay ay u caal waayeen weeraro Shabaabka ku soo qaadayeen degmada Awdheegley.
Sida ay sheegayaan wararka ciidamada ayaa si nabdoon kula wareegay Tuulooyinka Mubaarak, Daar-Salaam iyo Mareere oo ah tuulooyin hoos yimaada Awdheegle, kuwaasoo caan ku ah wax soo saarka beeraha.
Gudoomiye kuxigeenka degmada Awdheegle ayaa sheegay in qabashada tuulooyinkaas ay suura gelinayaan in ammaanka deegaanada shabellaha Hoose la xaqiijiyo, isagoo xaqiijiyay in deegaanadaas Shabaabka weerar ka soo qaadayeen.
“Ma dhicin dagaal, nimaankaas waa carareen howdka ayay galeen, hortii degmada dhuumaaleysi ayay ku soo weerari jireen”ayuu yiri Gudoomiye kuxigeenka degmada.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii Afhayeenka howl galada Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in dagaalo iyo weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan Shabellaha Hoose ku dileen ilaa 21 askari ka tirsan AMISOM.
Ciidamada AMISOM ayaa tan iyo sanadkii hore isku ballaarinayay deegaano ka tirsan gobolada dalka, iyadoo dhowaan sheegay inay isu fureen wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Previous articleWabiga Shabelle oo ka fatahay deegaanka Maandheere ee degmada Jowhar
Next articleIska hor imaad ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex maray degmada Dayniile